Oscillator Cajiib ah. Qeybta 2: istiraatiijiyadda iyo talooyinka | vfxAlert official blog
Oscillator Cajiib ah. Qeybta 2: istiraatiijiyadda iyo talooyinka
Qaybta koowaad ee maqaalka, waxaan soo bandhignay qawaaniin aasaasi ah oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah iyadoo la adeegsanayo Oscillator Awesome. Midda labaad waxaan hagaajineynaa natiijooyinka waxaanan ku siinaynaa talooyin ku saabsan ganacsiga.
Istaraatijiyadaha ganacsiga iyadoo la adeegsanayo AO
Mid ka mid ah mabaadi'da barashada ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa leh "hal qalab ma noqon karo qodobka ugu dambeeya ee go'aan qaadashada" iyo in lagu daro waxay lagama maarmaan u tahay qaabka tilmaamayaasha xisaabinaya xuduudaha kale ee suuqa hadda jira. Yaan la doodin aragtida oo aan tusno laba tusaale oo ah sida loo adeegsado Oscillator Cajiib ah xeelado adag.
Oscillator Cajiib ah + Accelerator / Khiyaaneeye Oscillator (AC)
Isku darka labada tilmaamayaasha Williams: AO waxay muujineysaa jihada isbeddelka, AC waxay muujineysaa firfircoonaanteeda.
Ikhtiyaarka Wicitaanka : Tilmaamuhu wuxuu midabbada ka beddelayaa casaan illaa cagaar, kadib laba tiir oo cagaaran ka dib oo wuxuu beddelaa AC sidoo kale midab cagaaran, BUY furan. Markay labada tilmaamuhu isu rogaan casaan - meel u dhow.
FUR ikhtiyaar ah: xaaladaha ka soo horjeedka - AO wuxuu u beddelaa midab casaan, wuxuu furan yahay ka dib baarka labaad. U dhow cagaarka AO iyo AC.
By oscillators waxaan ku go'aamineynaa jiritaanka barta laga soo galo, iyo isbeddellada. P-SAR waxay xaqiijineysaa isbedelka muddada-dhexe iyo heerka waqtiga dhicitaanka ee ugu habboon.
Tusaale ahaan istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waxaad ku dari kartaa tilmaamahan Parabolic SAR qorshahan - waxay go'aamin doontaa isbeddelka muddada-dhexe iyo muujinta heerarka dhammaadka ugu habboon.
Ikhtiyaarka Wicitaanka : eber AO kala-sooc xagga hoose ilaa kore, histogaraam AC cagaaran. Qodobbada isbarbar dhiga ee kor ku xusan qiimaha waxay xaqiijinayaan kor u kac. Waxaan xireynaa ikhtiyaarka markii PSAR ay u dhaqaaqdo dhinaca ka soo horjeedka shaxda.
FUR ikhtiyaar : shuruudaha ka soo horjeedka iibsiga.
Ogeysiis muhiim ah: istiraatiijiyaddu caadi ahaan waxay ku shaqeysaa oo keliya isbeddellada xoogga leh, fiiri Parabolic - tilmaamo dheeraad ah oo tilmaamaya qiimaha hadda jira, dhaqdhaqaaqa xooggan.
Sida oscillator kasta oo kale, faa'iidada xasilloon ayaa suurtagal ah oo keliya haddii dejinta saxda ah ee hanti gaar ah, waqti cayiman iyo xaaladda suuqa ee hadda jirta. Sidaa darteed, markaad ka fekereyso sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah , isla markiiba raadi nooc AO ah oo aad ku beddeli karto qiimayaasha xilliyada maxaa yeelay, tan iyo markii la abuuray tilmaamaha suuqa Williams, oo ay ku jiraan saamiyada, wax badan baa iska beddelay.
Intaa waxaa sii dheer, xuduudaha ma laha xiriir macquul ah oo ku saabsan arrimaha dibedda, marka loo eego isla Ichimoku, halkaasoo xisaabinta ay ku saleysan tahay sanadle (52 toddobaad), sanadle ah (26 toddobaad) iyo toddobaadle (7 maalmood) wareegyo. Gudaha 'Awesome Oscillator', xuduudaha ayaa lagu xushay si gaar ah oo awood leh!
Xusuusnow in laba celcelis celcelis ahaan ay dhaqaaqayaan: "Qunyar" mid (saldhiga 34) ayaa go'aamiya jihada isbeddelka waqtiga shaqada, iyo "Degdeg" mid ah (muddada 5) ayaa mas'uul ka ah helitaanka meelaha laga soo galo.
Laguma talin in la yareeyo tirada muddooyinka isbeddellada, si aysan ugu dhicin suuqa "buuqa", laakiin qaybta dhakhsaha leh ee AO waa la hagaajiyaa iyadoo kuxiran isbeddelka hadda jira - muddooyin badan oo hooseeya, ka hooseeya mid sare.
Astaamaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo la isku halleyn karo ayaa ka muuqda isgoyska heerarka eber, sidaas darteed qiimaha waa inuu si firfircoon ugu gudbaa isbeddellada.
Haa, suuqa "caajisnimada", tilmaamaha AO wuxuu muujin karaa "suugada" aad loogu kalsoonaan karo, laakiin dhab ahaantii, waxaan lahaan doonnaa sicir maxalli ah oo ah 10-15 dhibcood, oo aan inbadan lagu kasban karin.
Sida xilliga ganacsiga ugu muhiimsan, u adeegso fadhiyada Yurub iyo Mareykan Forex, halkaas oo dhiirrigelinta 30-40 dhibcood ee labada dhinacba ay caadi yihiin.
Markay gudbayaan, oscillators-ku badanaa wey fashilmaan, ee ka joog suuqa ama ka shaqee istaraatiijiyad ka duwan tii hore!
Waqtiga shaqadu kama hooseeyo M30, tilmaamaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah wuxuu si adag ugu talinayaa dadka bilowga ah inaysan ka hoos ganacsan H1. Inta lagu jiro guri fidsan, laakiin "ballaaran", tilmaame ayaa bixin kara calaamado la isku halleyn karo. Marka fur ikhtiyaar mise?
Waqtiga udhaxeeya wax kayar M30 xaqiiqdii maahan, xaaladaha kale, waxaad isku dayi kartaa inaad ka ganacsato maxaa yeelay waqtiyada sare ee waqtiyada waa ka dheer yihiin iyagoon dib u celin ficil iyo dib u celin toona lahayn. Laakiin waxaa jira saddex shuruudood oo qasab ah:
Gurigu waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-50 dhibcood;
Astaamaha Oscillator-ka ee cajiibka ah ayaa kaliya lagu xaqiijiyaa tilmaamayaasha kanaalka, sida Bollinger Bands: isgoyska heerka eber ee ka soo kabashada xadka kore / hoose, "saxan" loogu talagalay macaamilada khadka dhexe.
Xusuusnow dhaqdhaqaaqyada dhinac kasta u dheereeya, inay sare u kaceyso suurtagalnimada waxqabadkeeda fiiqan, ee ha ku qaadin tiro badan!
"Alligator" sidoo kale wuxuu ku habboon yahay inuu yahay tilmaame isbeddel ah, oo ka yimid Bill Williams, oo isagu markii hore u qaatay in qalabkiisa loo isticmaali doono oo keliya isugeyn. Iyada oo ku saleysan tan, iskudhafka xuduudaha asalka ah ayaa la xushay, markaa iskuday inaadan ka bixin "classics".
Kala-baxa waa in lagu xaqiijiyaa tilmaamayaasha mugga, xitaa kuwa shilinta. Marka uu jiro dhaqdhaqaaq dhinacyo badan leh, iyo firfircoonaanta tirooyinka si xag-jir ah isma beddelaan, calaamadaha ugu yar ee bilaashka ah ee bilaashka ah waa been.
Tani waxay sidoo kale khuseysaa calaamadaha kale ee AO, tusaale ahaan, haddii mugga dibiyadu aysan kordhin ka hor inta aysan jabin eber si ay u iibsadaan, markaa tani waxay u badan tahay kala-jebin mala-awaal ah, oo waliba si dhakhso leh u soo jeesan karta.
Ha iloobin in aan la macaamleyno Celceliska Dhaqdhaqaaqa, taas oo ah aaladda falanqaynta farsamada ee ugu hooseysa. Sidaa darteed, suurtagal ma noqon doonto in si sax ah loo galo bilowga isbeddelka, laakiin isbeddelka mugga ayaa ku siin kara calaamadda hogaaminta!
Aynu soo koobno: waxaan dhihi karnaa marka loo eego 'Awesome Oscillator', weedha "Bill Williams 'oscillator cajiibka ah" waa wax xoogaa la buunbuuniyey, nooca caadiga ah ee isku halaynta calaamaduhu kama sarreeyo isla MACD. Laakiin marka lagu daro aaladaha kale ee Williams waxay aasaas wanaagsan u noqon karaan istiraatiijiyad muddada-dhexe ah ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah .